Fa maninona no hitantsika ny hoditry ny alika? | Alika Manerantany
Fa maninona no hitantsika ny hoditry ny alika?
Monica Sanchez | | aretina
Una scab amin'ny hoditra ny sakaizantsika volom-borona matetika dia mitranga amin'ny faritra manokana, mety ho ratra nateraka izany satria ilay alika dia nahakamotra loatra, amin'ny kapoka na manaikitra sasany izay nomen'ny biby hafa, na dia mifanohitra amin'izay aza, ny takalona sasany dia mety ho famantarana fa ny antony mahatonga azy ireo dia olana iray mampiahiahy bebe kokoa.
Ka hanana ny fahafaha-manao a famakafakana bika, ny habe sy ny halehibeny amin'izy ireo, dia iray amin'ireo dingana lehibe tsy maintsy ataontsika mba hananantsika fahalalana momba ny antony ananan'ilay alikay amin'ny hodiny.
1 Antony fanosotra
1.1.1 Dermatitis atopika
1.1.2 Seborrheic dermatitis
1.1.4 Canine leishmania
1.1.5 Aretina masirasira
1.1.6 Canoder pyoderma
1.1.7 Sakafo ratsy na fahadiovana tsy madio
1.1.8 Mampiasà shampooing
1.1.9 Fandroana azy be loatra
1.1.10 Afangaro amin'ny borosy diso
2 Misy alika ny lohako
3 Fa maninona no misy teboka mainty amin'ny hoditry ny alika?
4 Fa maninona ny alikako no misy scab amin'ny sofiny?
5 Fa maninona no misy scabs eo amin'ny vavan'ilay alika?
6 Fitsaboana ny alika amin'ny alika
6.1 Ireo lohahevitra
Ary koa mila mitandrina tsara amin'ny fihetsika mety hitranga amin'ny alika isika, raha hitantsika fa misy famantarana izay maneho fa marary izany, raha niova ny toetrany na raha ny mifanohitra amin'izay dia mijanona tsy mihinana intsony. Noho io antony io sy ato amin'ity lahatsoratra ity, dia atolotray anao ny sasany amin'ireo antony mahatonga ny fikotranana, ny soritr'aretina ary inona ny vahaolana.
Ny iray amin'ireo aretina mety hiteraka scab amin'ny hodin'ny alika dia ny dermatitis. Misy karazany samy hafa ny dermatitis, fa misy roa ihany no misongadina satria izy ireo mamoaka an'io olana io amin'ny hoditry ny alika ary ireto karazany roa ireto dia ireto:
Aretin-koditra io ary tsy misy fiantraikany amin'ny olombelona tsotra izao, fa mety hisy fiatraikany amin'ny hoditry ny biby koa. Ny antony mahatonga an'io aretina io dia mbola tsy fantatra tanteraka.
Milaza ny manam-pahaizana fa aretin-koditra miato izy io, izay miseho rehefa misy agents sasany manelingelina ny hoditra ary matetika ireo soritr'aretina voalohany dia miseho amin'ny taona 3 sy 6 volana.
matetika, iray amin`ireo famantarana ny aretina ny mangidihidy mafy, zavatra iray izay maratra mafy matetika, ratra ary mazava ho azy ireo takelaka voalaza etsy amin'ny hoditra.
Toy izany koa no ahitantsika ny mena eo amin'ny faritra sasany amin'ny hoditry ny alika ary mety ho ny fihenan'ny volony ihany koa. Aretina tsy misy fanasitranana io, nefa azo fehezina raha mahazo ny alika rehetra ny alika izay hanampy be tokoa hanamaivanana ireo soritr'aretina.
Fantatra amin'ny anarana hoe seborrhea canine koa izy io, io dia aretina iray hafa izay misy fiatraikany amin'ny hoditra ary mitranga matetika amin'ny alika, izay Izy io dia misy fiantraikany betsaka indrindra amin'ireo faritra amin'ny tarehy, ny tongotra ary koa ny taolana.
Ity karazan'aretina ity dia vokatry ny fihinanam-bilona be loatra avy amin'ny inona ny fihary atiny, ka hitantsika fa misy mizana mavo na fotsy mipoitra mifatotra amin'ny volo, amin'ny crust kely eo amin'ny hoditra noho izany dia mangototra be ilay biby ary manampy mba hahafahantsika mahatsapa fofona amin'ny vatan'ny alika izay tsy mahafinaritra.
La lagaly Izy io dia aretin-koditra ateraky ny bibikely, izay mitady toerana hipetrahana ny hoditry ny alika mba hohanina amin'ny keratin ary koa ny sebum ananany, ka haingana dia haingana izy ireo no mamokatra ary miparitaka manerana ny hoditry ny biby vatana.
Ao amin'ireo karazan-koditra roa dia misy, mangidihidy mafy ny alika eo am-piandohan'ny aretina. Rehefa mandroso io aretina io dia hitantsika fa mihamafy ny hoditra mandra-pitresiny ary miavaka kokoa ny foza. Toy izany koa, ny fihenan'ny volo sy ny fofon'ny vatana ratsy.
Fantatra amin'ny anarana hoe the leishmaniasis, Izy io dia misy patolojia mitaiza tsy misy fanasitranana, noho izany ny fitsaboana ny aretina dia ny fanalefahana ny soritr'aretina fotsiny ary manome alika fiainana tsara kokoa ny alika. Aorian'ny aretina dia misy dingana mihombo ao anaty izay mety haharitra 3 ka hatramin'ny 18 volana farafahakeliny, aorian'izay dia hanomboka hiseho ny soritr'aretina.
Ny fiovana eo amin'ny hoditra dia handroso ary hihamatanjakaAo no hisehoana ny takotra sy ny ratra, homarihina koa ny fahaverezan'ny lanjan'ilay biby sy ny fihenan'ny volo eo an-toerana, indrindra amin'ny tongotra, rambony ary loha.
Ny alika, na eo aza io aretina tsy misy fanasitranana io, dia afaka manana fiainana tsara raha toa ka manaraka ny fitsaboana natolotry ny mpitsabo biby ary hamafisina amin'ny sakafo mahasalama sy sahaza an'ireo tranga ireo.
Aretin'ny holatra dia afaka manana ny fiandohany amin'ny antony maroNy iray amin'izy ireo, ny fandroana matetika, dia mitohy hatrany amin'ny tontolo iainana hamandoana avo, ny fifandraisany amin'ireo biby marary, ny fihenan-tsofina amin'ny alergen amin'ny tontolo iainana sy ny aretina fanefitra.
Ilay alika voan'ny holatra hoditra dia haneho soritr'aretina manokana, toy ny fihenan'ny volo eo an-toerana, ny mangidihidy mafy ary ny fikororohana, ny fivontosana, ny mena, ny foza ary ny dandruff. Raha ny foza dia mazàna manana endrika boribory izy ireo.
Izany dia aretin-koditra bakteria ateraky ny fidiran'ny parasy amin'ny alika, izay heverina ho aretina tsotra na mety ho avy amin'ny aretina ara-pahasalamana na patolojia hafa ary hivadika aretina sarotra. Anisan'ireo aretina mety hiteraka aretina sarotra mahazo antsika: leishmaniasis, hypersensitivity amin'ny hoditra sy ny hafa.
Ny fiparitahan'ny pyoderma Haingam-pandeha izy io ary misy fiantraikany amin'ny faritra rehetra amin'ny hoditry ny biby, na dia matetika aza ny taolana, ny loha ary ny tongotra. Ny soritr'aretina dia ny fivontosana, ny mena, ny mangidihidy be loatra, ny fisian'ny kirany sy ny ratra, ity farany kosa dia tsy maintsy harahina mba tsy hiharan-doza noho ny aretina ny fisian'ny foza, ny rà ary ny pus.
Sakafo ratsy na fahadiovana tsy madio
Ny valin'ny saon-koditra amin'ny hoditry ny alika dia mety amin'ny sakafo, fahazarana madio ary amin'ny ankapobeny ny fikarakarana voarainy. Rehefa manome ny kaninina amin'ny sakafo voalanjalanja sy kalitao ianao, amin'ny lafiny iray, dia miantoka fiainana salama izay manampy amin'ny fanamafisana ny hery fiarovanao ianao.
Mety ho tsikaritra rehefa tsy ampy otrikaina sy proteinina ny sakafo, ao anaty palitao sy ny hoditra satria samy ho maizina izy roahoditra maina, tsy misy aina, vaky, mafy, mihosin-koditra ary mizana.
Raha tsy fantatrao izay karazan-tsakafo homena dia angataho ny mpitsabo anao hanome torohevitra, izay azo antoka fa hanome soso-kevitra iray izay afaka manarona ny filany rehetra.
Ny teboka manan-danja iray hafa dia ny fahadiovan'ny alika, satria raha tsy marina izy io dia hipoitra ny andiam-panafody izay hiteraka scabs, dandruff, ratra, sns. Ireto ny fahazaran-dratsy momba ny fahadiovana izay tokony hialanao:
Ny idealy dia vokatra natao ho an'ny hoditry ny biby, indrindra rehefa manana hoditra marefo ianao na manana dermatitis satria ny vokatra dia tsy maintsy manokana ho an'io patolojia io.
Fandroana azy be loatra
Tokony handro isam-bolana na isam-bolana sy tapany ny alika, ary raha tsy voamarika fa maloto. Raha misasa matetika kokoa ianao, dia simba ny sosona miaro ny hoditrao, miteraka aretin-koditra.
Ahoana ny fandroana ny alika ao an-trano
Afangaro amin'ny borosy diso
Misy borosy mety amin'ny karazana palitao tsirairay. Rehefa ampiasaina ilay tsy mety dia atahorana hiteraka ratra amin'ny hoditra. Ho fanampin'izay, afaka miseho koa izy ireo raha manakodia ny volonao matetika loatra.
Misy alika ny lohako
Raha misy alika eo amin'ny lohanao ny alikanao dia mety dia vokatry ny iray amin'ireo aretina amin'ny hoditratoy Leishmaniasis, hypersensitivity amin'ny hoditra, scabies, ankoatry ny hafa, izay amin'ny tranga rehetra dia miteraka mangidihidy be loatra izay mahatonga ny alika hikorontana mafy hatramin'ny fahatapahana ny hoditra ka miteraka ratra, fery ary kirany.
Ny zavatra voalohany dia ny mankany amin'ny mpitsabo aretin-tsaina mba hanombanana tanteraka, ny fitsapana diagnostika izay tsotra be izay hamela hanilika ny mety ho antony sy hahitana ny niandohan'ny olana.
Fa maninona no misy teboka mainty amin'ny hoditry ny alika?
Ireo teboka mainty ireo dia mety hiseho amin'ny alika na amin'ny firy na firy, ary olana amin'ny hyperpigmentation ny ankamaroany, izay mitranga rehefa mitombo be ny lokon'ny hoditra noho ny famokarana melanine betsaka.
Ireo teboka mainty ireo dia tsy tokony hiteraka fanairana raha tsy miaraka amin'ny soritr'aretina tsy mahazatra hafa, na izany aza ary ho an'ny fandriam-pahalemana bebe kokoa, raha miseho izy ireo dia tokony hitsidika ilay mpitsabo biby mba hamoaka fa olana ara-pahasalamana iray hafa io.
Ireto no sasany amin'ireo antony mahatonga ny teboka mainty amin'ny hoditry ny alika:
Fisehoan'ny masoandro: mora tohina toa antsika amin'ny masoandro izy ireo ary raha vokatry ny fiparitahana ireo teboka ireo dia tsy maintsy apetraka amin'ny loha sy aoriana.
Amin'ny taona: rehefa antitra izy ireo dia mety hiseho ireo teboka ireo, izay tsy mampidi-doza tanteraka.
Amin'ny fikorontanana: ateraky ny fikorontanana rehefa mihetsika ary amin'ny ankapobeny dia eo ambanin'ny tongotra sy ny soroka.
hypothyroidism: hand hypothyroidism dia mamokatra ireo teboka ireo miaraka amin'ny soritr'aretina hafa amin'ny alika misy karazany.
Aretin'i Cushing: ateraky ny hormona be loatra noho ny fivontosana ao amin'ny fihary adrenal na pituitary, ary koa noho ny fihanaky ny steroid be loatra. Izany dia miteraka teboka mainty amin'ny hoditra miaraka amin'ireo soritr'aretina hafa.
Hoditra elefanta amin'ny alika: Fantatra amin'ny anarana hoe Malassezia koa izy io, satria izy io dia ao amin'ny holatra iray izay misy amin'ny faritra sasany amin'ny hoditry ny alika. Mitranga ny aretina rehefa lasa voan'aretina ireo holatra ireo ary miteraka mangidihidy mafy, dia rehefa manova ny endriny ilay hoditra voakasik'izany ary mitovy amin'ny an'ny elefanta. Ny masirasira dia ampandehanana ary mivelatra tsy voafehy noho ny antony maro, ny fitomboan'ny tsiambaratelo amin'ny hoditra, ny hamandoana tafahoatra, ny rora parasy, ny tsy fahampian'ny sakafo, ny fiarovana ambany, ny seborrhea, sns.
Mangidihidy sy hoditra mainty amin'ny alika: raha marikivy be ilay alika ary manana hoditra mainty koa, tandremo, satria mety manatrika aretina dermis mitaiza isika. Raha ny tena izy, ny hoditra dia tsy hanova ny loko fotsiny fa koa ny hateviny, vokatra avy amin'ny fikororohana be loatra ka nanimba azy.
Aretin-koditra alika antibiotika: raha tratran'ny aretin-koditra dia ny mpitsabo biby no nahazo alalana hanome antibiotika tena manokana, raha tsy hitany fa ilaina izany. Amin'ny ankapobeny, ireo izay misy amoxicillin sy clavulanate dia ampiasaina, mety tsara amin'ny fitsaboana aretina vokatry ny bakteria, indrindra amin'ny hoditra sy ireo sela malemin'ny biby.
Fa maninona ny alikako no misy scab amin'ny sofiny?
Ireo no vokatry ny dermatoses nateraky ny scabies indrindra, na dia mety manana ny niandohany aza izy ireo amin'ny pathologies hafa toy ny hypothyroidism, seborrhea, alopecia miaraka amin'ny fahatsapana malefaka, vasculitis amin'ny sofina, seborrhea, atopy na myiasis, ankoatry ny hafa.
Izy ireo dia miaraka amin'ny soritr'aretina hafa toy ny alopecia, ulceration, nekrosis na seborrhea.
Fa maninona no misy scabs eo amin'ny vavan'ilay alika?
Rehefa miova ny sombin'ilay alika ary raha mihalehibe ny hoditra, miova ny lokony ary mihombo, manome endrika ankapobeny ny fahamendrehana sy ny fahamainana, mety miatrika sarin'ny lesona hyperkeratosis isika. Ny tsara indrindra dia ny mahita mpitsabo biby.
Fitsaboana ny alika amin'ny alika
Ny fitsaboana ireo aretina ireo dia miankina amin'ny hatraiza ny faharetan'ilay alika, amin'ny ankapobeny dia fitambaran'ny fanafody am-bava sy ny vokatra azo avy amin'ny lohahevitra.
Toy ny shampoos hamongorana ny tavy be loatra Miaraka amin'ny anti-fungal, ny fahita matetika sy ny fotoana fampiasana dia tsy maintsy faritan'ny manam-pahaizana manokana. Ireo dia hatolotry ny mpitsabo biby.
Fanafody antifungaly am-bava ary matetika koa dia misy antibiotika sasany hiadiana amin'ny otrikaretina bakteria miaraka amin'ity karazana aretina ity.
Ny tanjon'ny fitsaboana dia ny hampifantoka ny sain'ny olona sy ny famongorana ny toe-pahasalamana voalohany, ary mandritra izany fotoana izany dia hitsaboana ny tsimokaretina bakteria faharoa izay miteraka scabs.
Ity fitsaboana faharoa ity dia afaka maharitra herinandro maromaro rehefa lalina sy maharitra ny aretina. Soso-kevitra ny hitantana an-tsakany sy an-davany ny antibiotika isan'andro sy amin'ny fotoana atolotry ny manam-pahaizana manokana, fa tsy mandingana fatra.
Ny fitsaboana dia tsy maintsy tanterahina hatrany am-piandohana ka hatrany am-piandohana, na dia tsikaritra aza fa nahasitrana ny foza sy ny fery, raha sitrana tsikelikely kosa ny hoditra; Satria satria tapaka ny fitsaboana ary mbola mijanona ny bakteria dia azo averina ny aretina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Fa maninona no hitantsika ny hoditry ny alika?
hauser arias dia hoy izy:
Salama, salama maraina, ny alikako 4 volana dia manana karazana mange faharoa izay ahalany volo ary mivoaka ny mavo vaky ... ahoana no fomba hitondrako azy ...
Mamaly an'i Haumer arias
Salama, ny alikako dia 4 volana sy tapany, mampiseho sary amin'ny handriny izay azon'ny lohany izy, tsy nilatsaka tamin'io toerana io ny volony. Tsy fantatro hoe nahoana izany
Valiny tamin'i Melissa
Inona no hatao raha nihinana ba kiraro ny alikako?